REPUBLICADAINIK | » गुन्डा नाइकेलाई ज्यानको माया, उठाए नयाँ कदम
गुन्डा नाइकेलाई ज्यानको माया, उठाए नयाँ कदम
काठमाडौं । आफ्ना कामले निम्त्याउने संकटसँग कसलाई पो डर लाग्दैन र ? राम्रै गरेपनि डराउने कम छैनन् । धर्म ग्रन्थमा नै उल्लेख छ, आफ्ना सुविधाका लागि सृष्टि गरिएका दानव भष्मासुरसँग महादेव डराएर भाग्नुपरेको थियो । मान्छेलाई त डर किन नहुनु ? यही नियती अहिले एकजना डनलाई परेको छ ।
एकताकाका चर्चित गुण्डा नाईके काजी शेर्पा अहिले ज्यान जोगाउन बुलेटप्रुफ ज्याकेटको साहारा लिने गरेको रहस्य खुलेको छ । प्रहरी ईन्काउन्टर र आफ्ना दुश्मनबाट बच्न तथा कुनै पनि समय आफूमाथि हमला हुन सक्ने आशंका गर्दै गुन्डा नाइके शेर्पाले बुलेटप्रुफ ज्याकेटको प्रयोग गर्ने गरेको उनी निकटका एकजना साथीले बताए ।
एक दशकदेखि प्रहरी र सेनामा रासनदेखि लत्ताकपडा सप्लाई गर्दै आएका शेर्पा ठेक्कापट्टामा समेत राम्रै जमेका छन् । गुण्डागर्दीको आडमै ठेक्कापट्टामा जमेका शेर्पा पछिल्लो समय लेनादेनाको बिबादकै कारण प्रहरी हिरासतसम्म पुग्दै आएका छन् ।
प्रहरीसँग भन्दा पनि पुराना आफ्नै समूहबाट बिच्किएका केही समूहबाट खतराको संकेत पाएपछि शेर्पाले बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाउने गरेको उनी निकट एक व्यक्तिले बताए ।
शेर्पाले एक दशक अगाडिसम्म प्रहरी ईन्काउन्टरमा मारिएका घैंटे भनिने कुमार श्रेष्ठ र हाल नख्खु कारागारमा रहेका अर्का गुण्डा नाईके समिरमान बस्नेतलाई हात लिएर काठमाडौंमा गुण्डागर्दी गर्ने गरेको प्रहरी भनाइ छ ।
शेर्पालाई अहिले त्यही समूहबाट खतरा बढेको स्रोतको दाबी छ । घैंटे ईन्काउन्टरमा मारिएपछि भारतको बिभिन्न ठाँउमा बसेर गुण्डागर्दी गर्दै आएका बस्नेतलाई तीन महिना अगाडि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो ।
निमार्ण व्यवसायी शरदकुमार गौचन हत्यासहति आधा दर्जन अभियोग लागेका बस्नेत हाल मुद्दा पुर्पक्षको लागि कारागारमा छन् । घैंटे ईन्काउन्टर पश्चात कुनै सहयोग नगरेको भन्दै बस्नेतले शेर्पालाई धम्क्याएपछि शेर्पाले बुलेटप्रुफ ज्याकेट लगाउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
डलर देखाएर लुट्ने धन्दाका जन्मदाता शेर्पा गुण्डा नाईके हुँदै अहिले चल्तीका ठेकदारका रूपमा चिनिन्छन् । उनले ठेक्का हत्याउन गुण्डागर्दी कै शैली अपनाउने गरेको निमार्ण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
Published : Tuesday, 2018 March 27, 5:53 pm
चन्दा असुली गर्ने दुई जना पक्राउ
दुबईमा खेल, बाराबाट तीन जना पक्राउ
बारामा गोली हानेर भारतीय नागरिक पक्राउ
प्रहरीद्वारा साढे एक करोडको यार्चागुम्बासहित मान्छे पक्राउ
रौतहटमा आफ्नै छोरीकी साथी सिध्याउने तेली पक्राउ
काठमाडौंमा बैंकका सुरक्षा गार्डमाथि खुकुरी प्रहार